गुरुङ ब्यूटी पार्लर एण्ड एकेडेमीको छैटौँ शाखा चिप्लेढुङ्गामा,शाखा विस्तारको अवसरमा निःशुल्क सौन्दर्य शिविरको आयोजना | Jukson
गुरुङ ब्यूटी पार्लर एण्ड एकेडेमी प्रा.लि. को छैटौँ शाखा पोखरामा चिप्लेढुङ्गामा विस्तार गरिएको छ । शाखाको शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मी जिसीले उद्घाटन गरिन् ।
पोखराको चिप्लेढुङ्गामा( पोखरा ट्रेड मलको अगाडी ) विस्तार गरिएको शाखाको उद्घाटन पनि बोल्दै जिसीले हिंसाको प्रमुख कारण महिला परनिर्भरता भएको बताईन् । जबसम्म महिला आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, तबसम्म हिंसा काम नहुने उनलेको भनाई थियो । त्यसैले सिप सिकेरआत्मनिर्भर हुन उनले सम्पूर्ण महिलामा आग्रह गरिन् ।
एक फरक प्रसङ्गमा उनले सौन्दर्य महिलाको गहना भएको बताई् । सौन्दर्यले महिलालाई स्मार्ट बनाइराख्ने भएकोले सौन्दर्य हुनु र सौन्दर्य कला शिक्षा आजको आवश्यकता भएको औँल्याईन् । साथै उनले गुरुङको छैटौँ विस्तारको उत्तरोत्तर प्रगतीको कामना गरिन् ।
छैटौँ शाखा विस्तारको अवसरमा एकेडेमीले शुक्रबारबाट पोखरामा दुई दिवसीय निःशुल्क सौन्दर्य शिविरको आयोजना गरेको छ । यो शिविर पोखरामै पहिलो पटक भएको आयोजकको दाबी छ ।
उक्त शिविरमा छाला विशेषज्ञ डा. सरस्वती शर्मा र सौन्दर्य विशेषज्ञ चिनु गुरुङले छाला र कपाल सम्बन्धी निःशुल्क जाँचको साथै परामर्श पनि प्रदान गर्ने छन् । शिविरको अन्य आकर्षणहरुमा छाला सम्बन्धी परामर्श, कपालका विभिन्न समस्या सम्बन्धी परामर्श, निःशुल्क छाला परिक्षण, शिविर अवधिभर फेसियल र हेयर ट्रिटमेण्टमा ५० प्रतिशत छुट र शिविर अवधिभर ब्यूटिसियन तालिम सम्बन्धी भर्नामा २० प्रतिशत छुट व्यवस्था भएको गुरुङ ब्यूटी पार्लर एण्ड एकेडेमी प्रा.लि. का सौन्दर्य विशेषज्ञ चिनु गुरुङले जानकारी दिईन् ।
शिविर शनिबारसम्म चल्ने छ ।